ग्लोबल वार्मिंगको परिणामस्वरूप स्पेनले हिमनदीको खल्तीबाट भाग्न सकीयो नेटवर्क मौसम विज्ञान
ला मालाडेटा हिमनदी (पाइरेनीज)
ग्रह गर्मी को रूप मा स्पेनको हिमालहरू हिमपातबाट बाहिर गइरहेका छन्। ती क्षेत्रहरू जहाँ उचाई उच्च छ र मानव क्रियाकलाप विरलै छ, हाम्रो देशमा ग्लोबल वार्मिंगको प्रमुख साक्षीहरू मध्ये एक भएको छ।
पछिल्लो शताब्दीमा लगभग 90 ०% विस्तार हराइसकेको छ, र बरफको यो पछाडि १ 1980 .० देखि तीव्र भएको छ। यदि स्थिति यस्तै रह्यो भने, 40० बर्षमा त्यहाँ कुनै हिमनदी बाँकी रहन सक्दैन।
ग्लोबल वार्मिंगको प्रभाव देशको अग्लो पहाडहरूमा महसुस भइरहेको छ। पिरिनेस स्थित ला मालाडेटा हिमनदी, गत शताब्दीमा एक मिटर मोटाई गुमाएको छ। यस अवधिमा, यो hect० हेक्टेयर क्षेत्र ओगटेकोबाट २ 50..23,3 पुगेको छ। बरफको पातको मोटाईले केही क्षेत्रमा आठ फिट गुमाएको छ। केवल हिमनदी 3000००० मिटर उचाई माथि रहन्छ.
तर किन? किन यो स्पेनको उत्तरमा कम र कम गर्दन। द्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार क्यान्टाब्रिया मौसम विज्ञान समूह (UC), यसले शीत eतु दिनमा 60०% कम र वसन्तमा 50०% कम - शताब्दीको सुरूमा भन्दा बढी चार- गर्दछ। यसैले, यदि and० र s० को दशकमा and देखि million० लाख लिटर हिउँ खस्यो भने, दस वर्षमा यो २.60 मा सिमित भयो।
साथै, औसत तापमान degrees डिग्री सेल्सियस देखि than भन्दा बढि गएको छ। त्यहाँ वर्षामा पनि कमी आएको छ, २ 25% सम्ममा, १ 16 अर्ब लिटरबाट १२ सम्म झरेको छ, त्यसैले मूल्या to्कनका अनुसार संचित हिउँको of०% सम्ममा कमी आएको छ। एब्रो हाइड्रोग्राफिक कन्फेडेरेसन (CHE) को माध्यम बाट सन् १ 1984। 2014 र २०१ between बीचमा एरिन प्रोग्राम.
यस दरमा, २०2060० सम्ममा स्पेनमा कुनै हिमनदीहरू नहुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » स्पेनले ग्लोबल वार्मिंगको परिणामस्वरूप हिमनदीय क्षतिहरू चलाउन सक्दछ